James Swan oo gaaray Baydhabo | KEYDMEDIA ONLINE
James Swan oo gaaray Baydhabo
Wakiilka ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabislan Soomaaliya James Swan ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
BAYDHABO, Soomaaliya - Wafdi uu hoggaaminayo wakiilka ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa gaaray magaalada Baydhabo xarunta KMG ee Dowlad goboleedka KGS.
Madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa kusoo dhaweeyay wafdiga wakiilka, iyadoo uu haatan shir albaabada u xiran yahay uu uga socdo xarunta madaxtooyada maamulka KGS. Lama oga ajandayaasha iyo ujeedada safarka ee Wakiilka ergayga QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan uu ugu socdaalay magaalada Baydhabo.
Maamul goboleedka KGS ayaa isku diyaarinaya qabashada doorasho lagu muransan yahay taasoo ay horay ugu dhawaaqeen in ay billaabayaan doorashada kuraasta Xildhibaanada golaha Aqalka Sare.
Cabdicasiis Lafta-gareen madaxweynaha KGS oo xulufo la ah dowladda Farmaajo ayaa horay u shaaciyay inuu isku dayayo inuu ka qeyb qaato wada-haddalada dowladda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee ka maqan doorashada, inkastoo hadalkaasi yahay mid qawda-maqashii waxna ha u qabana.